Maamulka Galmudug oo si weyn ugu soo dhaweeyey Caasimadda Cadaado wufuud ka timid Jubbaland. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Macluumaadka GMDQ & Xisbiyada Maamulka Galmudug oo si weyn ugu soo dhaweeyey Caasimadda Cadaado wufuud ka...
Maamulka Galmudug oo si weyn ugu soo dhaweeyey Caasimadda Cadaado wufuud ka timid Jubbaland.
Madaxweynaha maamul-goboleedka Jubbaland Ax’ed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) oo gaaray magaalada Cadaado ee gobolka Galguduud ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay, waxaana garoonka uga hortagay xubno uu ka mid ahaa madaxweynaha Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed.
Booqashada Axmed Madoobe uu maanta ku tagay Cadaado ayaa lagu sheegay in ay tahay sidii uu kulammo ula yeelan lahaa mas’uuliyiinta maamulka Galmudug; iyadoo markii uu tagay degmada Cadaado isla markiiba kulan irduhu u xiran yihiin la galay madaxewynaha Galmudug.
Wararka laga helayo magaalada Cadaado ayaa sheegaya in Axmed Madoobe iyo C/kariin Guuleed ay kulankooda kaga hadlayaan arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin; ammaanka, xiriirka labada maamul u dhexeey iyo Hiigsiga 2016-ka.
Madaxweynaha Galmudug, Axmed Madoobe ayaa waxaa safarka ku wehlinaya xubno ka tirsan golihiisa wasiirrada, iyadoo booqashadan ay imaanayso xilli la filayo in todobaadka soo socda lagu wado inuu Kismaayo ka furmo kulan looga hadli doono qaab doorasho ee dalka ka dhici doonta sannadkan.
Inkatsoo aan la ogeyn inta maalmood ee uu Axmed Madoobe joogayo Cadaado, iyadoo ay tani noqonaysaa booqashadii ugu horreeyay oo uu ku tago degmada Cadaado tan & markii la dhisay maamulka Galmudug.
Wixii Warar ah ee kasoo kordha booqashada Axmed Madoobe iyo wafdigiisa ay maanta ku tageen magaalada Cadaado waxaad kula socon kartaan wararka soo so socda ee warsom haddii ALLE ogolaado.
Previous articleBandhig faneed casri ah looguna magac darey Nabada iyo dib u dhiska tiyaatarka oo Muqdisho ka dhici doona.
Next articleSoomaalida ku nool koonfur afrika oo duco u sameeyey allaha u naxariistee Ugaas C/raxmaan Ugaas khaliif.